हाम्रो गोपनीयता नीतिको बारेमा थप
नि: शुल्क बजाउनुहोस्
सायद तपाईं हाम्रो स्थापनाको कारण र हामी के लागि खडाको बारेमा उत्सुक हुनुहुन्छ। हाम्रो मनसाय के हो र तपाईले हामीलाई भ्रमण गर्दा के तपाईंलाई जान्न आवश्यक छ? हामी हाम्रो जानकारी सबै प्रस्ताव को कारण हो किनभने हामीले चाँडै सोचे कि नेपाल खेलाडिहरु को बजार मा अपेक्षाकृत कम जानकारी थियो। हामी यो शर्म हो जस्तो लाग्छ, किनभने नेपाल बोनस सर्तहरू र सर्तहरू र विभिन्न अनलाइन क्यासिनोहरूमा खेल्ने नियमहरू पनि चासो राख्छन्।
हामी जान्नुपर्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामी वास्तविक पैसाको लागि खेल प्रस्ताव गर्दैनौँ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग यसका लागि धेरै पैसा तिर्न आफैलाई खेल खेल प्रयास गर्ने मौका छ। के तपाई साँच्चै शर्त चाहेको र पैसा खेल्न चाहानुहुन्छ? त्यसपछि हाम्रो समीक्षाहरूले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ सधैँ एउटा विकल्प पत्ता लगाउनुहुन्छ जहाँ तपाईं राम्रो खेल्न सक्नुहुनेछ।
कैसीनोसँग कुनै सहयोग छैन
हामीले पहिले यो उल्लेख गरेका छौं, तर यो पुन: जोड दिन महत्त्वपूर्ण छ - हाम्रो वेबसाइटमा कैसीनो संग सहयोग छैन। यसको मतलब यो हो कि जब हामी एक समीक्षा पोस्ट गर्दछ (सकारात्मक र नकारात्मक दुवै) हामी गर्छौं किनकि हामी हाम्रो जानकारी को समर्थन गर्छौं। यो जानकारीको उद्देश्य मात्र हो र तपाईं वास्तवमा यहाँ वैधको रूपमा छलफल गरिरहेको कुराको बारेमा विचार गर्नुपर्दछ।
जब यो व्यक्तिगत डेटा उपलब्ध गराउँछ, हामी तपाईंको भरोसाको मूल्यांकन गर्छौं। यसैले हामी व्यापारिक स्वीकार्य माध्यमहरू प्रयोग गरेर यो डेटाको रक्षा गर्न हामी सबै गर्न सक्छौं। तथापि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं पनि जान्नुहुन्छ कि बचत को कुनै पनि तरिका 100 प्रतिशत विश्वसनीय वा सुरक्षित छैन। यसैले हामीलाई सम्भव छैन कि हामी तपाईंको डेटाको सुरक्षालाई पूर्णतया ग्यारेन्टी गर्न सक्दछौं, यस तथ्यको बावजुद हामीले यो सुनिश्चित गर्न सबै काम गर्छौं।